NMDC # Journalism students present it to promote the awareness of Wuhan Corona virus. – NMDC
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on NMDC # Journalism students present it to promote the awareness of Wuhan Corona virus.
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့မှာအစပြုခဲ့တဲ့ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံကျော်ကို ကူးစက်ပျံနှံလျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စိုးရိမ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝူဟန်ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ ကူးစက်နိုင်သလဲ၊ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိမရှိ ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်သလဲ ၊ ဘယ်လို ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်လို့ ရသလဲ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သတင်းအတတ်ပညာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများက Hello ဆရာဝန်မှ အယ်ဒီတာချုပ် ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးထားပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့မှာအစပြုခဲ့တဲ့ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံကျော်ကို ကူးစက်ပျံနှံလျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စိုးရိမ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ ကူးစက်နိုင်သလဲ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သတင်းအတတ်ပညာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများက Hello ဆရာဝန်မှ အယ်ဒီတာချုပ် ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးထားပါတယ်။ NMDC # Journalism students present it to promote the awareness of Wuhan Corona virus.
Posted by Department of Journalism, National Management Degree College on Sunday, February 23, 2020
ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိမရှိ ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်သလဲ ၊ ဘယ်လို ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်လို့ ရသလဲ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ အပါအဝင် ဆရာဝန်ရဲ့ အကြုံပြုဖြည့်စွက်ချက်တွေ ကို ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စိုးရိမ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သတင်းအတတ်ပညာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ က Hello ဆရာဝန် မှ အယ်ဒီတာချုပ် ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်း ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးထားပါတယ် ။ NMDC # Journalism students present it to promote the awareness of Wuhan Corona Virus. ၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိ ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်သလဲ ဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်လို့ရသလဲ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေအပါအဝင် ဆရာဝန်ရဲ့အကြံပြုဖြည့်စွက်ချက်တွေကို ၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စိုးရိမ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်သတင်းအတတ်ပညာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများက Hello ဆရာဝန်မှ အယ်ဒီတာချုပ် ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးထားပါတယ်။ NMDC # Journalism students present it to promote the awareness of Wuhan Corona virus.